Madaxweynaha Soomaaliya: “Soomaalida waxa mideynkara ayaa badan waxa kala qaybin karana waa wax yar” • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya: “Soomaalida waxa mideynkara ayaa badan waxa kala qaybin karana waa wax yar”
Tagged With: President Hassan, Somali Government, Somaliland
Madaxweynaha Soomaaliya: “Soomaalida waxa mideynkara ayaa badan waxa kala qaybin karana waa wax yar”
January 31, 2013 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo ku sugan Brussels
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii maalintii shalay (Arbaca) Madaxweynaha Somaliland uu ka yiri Hargeysa “Soomaaliya dowlad nooma aha, Aqoonsiga Maraykanku siiyey Xukuumadda Soomaaliya ma ahan mid khuseysa Somaliland iyo xiriirkii ay la lahayd Maraykanka waxba iskama beddelin, 100 sano haddii ay nagu qaadanayso, dib ugu noqon mayso Soomaaliya.
Xassan Shiikh Maxamuud oo waraysi siiyey BBC ayaa sheegay in isagu hadalkaas aanu maqal, laakiin waxaan ogahay aqoonsiga la siiyey dowladda Soomaaliyeed cidkasta oo Soomaali ah ayey faa’iido ugu jirtaa, Cid gaar ah dan uguma jirto, Xassan Shiikh dan gaar ah u ma aha reer hebeloowna dan gaar ah uma aha Soomaali oo dhan ayey maslaxad u tahay, Somaliland masaalixda ka imaanaysa si weyn ayey uga faa’ideysaa ayuu yiri Xassan.
Madaxweynaha ayaa ballan qaadey in faa’iidada ka timaada aqoonsiga dowladiisa la siiyey ay xaqiijinayaan in ay Soomaali oo dhan gaareyso.
Madaxweynaha oo ka jawaabayey hadalkii Siilaanyo ee ahaa “100 sano haddey nagu qaadato soo laaban mayno” ayaa yiri, Soomaali maslaxd ayaa ugu jirtaa Midnimadda, Anagu Midnimo ayaan u taaganahay, Soomaali mid ah ayaan u taaganahay, waxaan sheegaya waxa kala qaybin kara dadka Soomaaliyeed aad ayey u yaryihiin waxa mideyn kara oo ay wadaagaan ayaa aad u badan, waxaana naga go’an in aan muujino faa’iidada ay leedahay Midnimaddu.
Maalintii shalay waxaa khudbad dheer oo uu jeediyey Madaxweynaha Somaliland ku caddeeyey in qaddiyadda goosashada ee Somaliland halkeedi taagan yahay aqoonsi kasta oo la siiyo Dowladda uu hoggaamiyo Xassan Shiikh, aanu waxba ka beddalayn.
Dhanka kale Madaxweynaha Puntland ayaa hadal kaas u dhaw ka soo baxay maalintii shalay waxaana uu marar badan ku goodiyey in Puntland tashaneyso haddii aan la ixtiraamin dasuurkii lagu dhisey dowladdan, isaga oo aan caddeyn qaabka ay u tashanayso.
Waxaa jira shaki weyn oo daka qaarkiis ka qabaan sida Madaxweynaha Jamhuuriyaddu u aaminsan yahay nidaamka federaalka ee dastuurka dalku dhigaayo, waxaana dadka eedeeya Siyaasaada Xassan Shiikh sheegayaan in uu ka soo horjeedo nidaamkaas isla markaana ay tahay sababta loo dhisi waayey qaar kamid ah maamuladda Gobolada Soomaaliya oo raadinaya in ay dhistaan mid la mid ah kan Puntland oo federaalka hoostagta.
Madaxweynaha ayaa eedaymahaas ku tilmamey mid aan waxba ka jirin oo la mid ah Dhurwaagii iyo caruurtii loo kala sheekayn jirey ee aan si arag.
Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud ayaa, maanta la hadalaya aqalka Baarlamaanka Midowga Yurub, kadbna waxaa uu safar ku tegayaa dalka Ingriiska isaga oo khdubad ka jeedin doona maalinta Isniinta ah ee todobaadka danbe aqalka Chatham House ee magaalada London.